Azo alaina ny volan’ny CNaPS, ny Caisse d’Epargne, ireo assurances hafa sy ny sisa saingy tokony hatao ara-dalàna sy mangarahara. Rehefa atao ao anatina tsy fangaraharahana io dia tsy hahatsara na oviana na oviana ny toekarena hoy izy ireo. Raha hampiasa ny “Fonds souverain” ny dia tokony hisy ihany koa fametrahana lalàna vaovao ny amin’ny fanaraha-maso ny Banky sy ny Orinasa ara-bola. Olana foana ny tsy fahafantarana mazava ny lalàna sy ny sazy amin’ny tsy fanarahan-dalàna mifanaraka aminy . Tokony ho fantatra mazava ihany koa hoe ny Fanjakana no tompon’andraikitra farany amin’ny alalan’ny Banky Foibe raha sendra misy maha-banky ropitra amin’ireny Orinasa eritreretina hakana ny Fonds souverain ireny. Ankoatr’izay dia nanambara ny teo anivon’ny CREM fa tsy laharam-pahamehana ary tsy hitondra fampandrosoana izany fampiasana ny Fonds souverain izany raha tsy manana ny bankiny entina hampandroso azy mihitsy aloha ny Malagasy (Banque de Développement). Hatreto mantsy dia ny any ivelany hatrany no manana tombotsoa betsaka amin’ny fisian’ireo banky ireo ary manana anjara kely na tsy misy mihitsy ny fanjakana. Tombony ny fananana ny “Fonds souverain” saingy ilàna fanapahan-kevitra mavesa-danja miaraka aminy mba tsy hampidaraboka ny toekarena.